Fampihavanam-pirenena : tsy arakaraka izay lazain’ny mpitondra ny ataony | NewsMada
Fampihavanam-pirenena : tsy arakaraka izay lazain’ny mpitondra ny ataony
Par Taratra sur 16/12/2016
“Tsy vita indray andro ny fihavanam-pirenena. Tsy maintsy miara-miaina izany ny rehetra. Tsy tenenina fotsiny io, fa mila iainana sy ampiharina. Tsy tokony ho ny filoha irery: izy efa manao izany, efa mitarika izany. Rariny loatra izy raha mitory an’izany.” Izay indray no nambaran’ny filoha Rajaonarimampianina tany Toliara, afakomaly, ny amin’ny fahalanian’ny lalàna momba ny fampihavanam-pirenena.
Be loatra ny ratra samihafa izay misy eto amin’ity firenena ity, ka miteraka elanelana eo amin’ny vahoaka. Eo amin’ny lafiny sosialy izany, fanabeazana, harena, faritra samihafa…
“Tsy maintsy ao anatin’ny fifampidinihana ao anatin’ny fihavanam-pirenena ihany no hahazoantsika mandravona izany rehetra izany”, hoy izy.
An’ny fitsarana ny “Raharaha Andriamananoro Augustin”
Avelany ho an’ny tomponandraikitra any amin’ny fitsarana sy any amin’izay manaraka izany asa izany ny fanontaniana momba ny “Raharaha Andriamananoro Augustin”, raha ny nambarany.
“Mila mifantoka amin’ny fampandrosoana isika”, hoy ihany izy. Tsy maintsy ao anatin’ny fihavanam-pirenena no hampandrosoana ny firenena. Indraindray, misy ihany ny mihoa-pefy. Aiza ny fandraisana andraikitra sy fitiavan-tanindrazana entina hampandrosoana ny firenena amin’izany?
Hafa ny zava-misy iainan’ny vahoaka ifotony
Mifantoka amin’ny fampandrosoana ve izao ataon’ny mpitondra izao sa paipaika sy kajikajy politika ranofotsiny hiatrehana ny fifidianana 2018? Na ny lalàna momba ny fampihavanana aza, tsy mampihavana… Tsy izao ataon’ny mpitondra izao ve no mahatonga ratra eo amin’ny vahoaka, mampisy elanelana eo aminy sy ny vahoaka?
Tsy ahoana, ohatra, ny kere any atsimo, ny tsy fandriampahalemana, avela anjakan’ny vahiny ny tany sy ny harena ao aminy… Tsy ny mpitondra ve no mila hampihavanina amin’ny vahoaka aloha, fa tsy hoe mpampihavana? Tsy hisy izay fihavanana raha ampangaina ho manakorontana sy manongam-panjakana avokoa izay mitsikera sy mihetsika rehetra. Tsy arakaraka izay lazaina tsinona ny atao?